आज कति छ सुनचादीको मूल्य ? - सिम्रिक खबर
आज कति छ सुनचादीको मूल्य ?
काठमाडौँ । आइतबार सुन तथा चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । यस दिन सुन शुक्रबारकै मूल्य ९६ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसैगरी चाँदीको भाउ पनि आइतबार प्रतितोला एक हजार ३१० रुपैयाँ खरिदबिक्रीकालागि निर्धारण गरिएको छ ।
पछिल्लो समय सुन चाँदीको मूल्यमा अस्थिरता देखिएको छ। भदौ महिना लागेसँगै सुनको मूल्यमा निकै उतारचढाव देखिएको हो। यस हिसाबले भदौ महिनामा मात्र सुनमा चार हजार ६०० रुपैयाँको भिन्नता देख्न सकिन्छ। मूल्यय घटबढ भइरहेपनि बजारमा सुनको ककारोबार भने छैन ।